UNIVERSAL TV: Sixid iyo Raalligelin baa la gudboon – somalilandtoday.com
UNIVERSAL TV: Sixid iyo Raalligelin baa la gudboon
Taxanayaasha filimmada ah ee ay sameeyaan Telefishanka Universal, waa halabuur wanaagsan oo in la bogaadiyo mudan fikir ahaan. Waxa intaa dheer, jilayaasha dhammaantood oo aan ixtiraam u hayo, gaar ahaanna kuwo badan oo magac ku lahaa fanka Soomaalida ee wakhtiyadii hore. Hase ahaatee, qaladaad soo noqnoqday baa jira oo u baahan sixid, beddelid iyo in qaarkood Telefishanku raalligelin ka bixiyo. Hore waxa u dhacday in taxane Telefishankaas ka baxa ay uga soo baxday waxyaabo aan u arkay inaanay ku qumanayn gudbinteedu oo meel-ka-dhac iila muuqday, gaar ahaan taxane Hargeysa lagu metelayay. Hase ahaatee, uma socdo taas oo wakhtigeedii la soo dhaaf, waxaanse jeclahay in aan tilmaamo khaladka taxanaha imika ku jira. Cilmiyan marka laga hadlayo jilidda filimada, riwaayadaha iyo waxsoosaarka la hal maala, waxa qoraaga, hagaha iyo soosaaraha ka reebban in magaalo jirta, deegaan la yaqaan iyo kuwo la mid ah lagu metelo amma loo bixiyo goobaha lagu metelayo, iyadoo loo eegayo marxaladda iyo fikirka bulsheedba. Sababtaas ayaa afeef looga dhigaa haddiiba magaalooyin la magacaabo in jilaha, goobaha iyo magacyadu yihiin kuwo male-awaal ah, haddiiba ay dhacdo inay qaarkood u ekaadanna ay ku timi si kama’ ah ee aan kas ahayn. Waa sababta sannado badan oo aan doorar kala duwan, sida Jile, hage iyo qore riwaayadeed ku shaqaynayay aan ula baxay waxsoosaarka magacyo kala duwan oo aan rasmi ahayn. Dhammaan meelahaasi ma ahayn magacyo magaalo jirta, waliba kuwo Soomaalidu ku noolyihiin waan ka ilaaliyaa, sababtoo ah ficillada qaar ku jiri kara jilista ayaa deegaannada qaarkood meel-ka-dhac ku noqonaya.
Haddaba, taxanaha lagu metelo dalka Ingiriiska ee ka baxa Universal TV ee Kaaf iyo Kala-dheeri, marka laga yimaaddo in taxanayaal hore oo siyaasadi hagayso ay jireen sidaan u arko, sababtoo ah jilista iyo hal-abuurku waa meelaha ugu badan ee dawladuhu siyaasaddooda mariyaan, haddana waxa Hargeysa iyo Somaliland ba meel-ka-dhac ku ah muuqaallo taxanahaas la socda. Tusaale ahaan, waxa jira muuqaal lagu sheegayo in qoys ka mid ah kuwa metelaya oo uu daba joogo nin doonaya inuu dilo uu ogaanayo in Hargeysa loo soo diray, waliba xaafadda Masalaha. Markaas ayuu odhanayaa, “Hargeysa’aa, imikaabad meel wanaagsan ii geysay”. Hargeysa ma meel la isku dilaa? Waxa kale oo taxanahaa ku jira Jile tegaya Muqdisho, dabadeed sheegaya in ay amni tahay, qof waliba tegi karo. Waxaan isweydiiyay ujeeddada Hargeysa ka dhigaysa meel lagu dili karo qofka yimaadda ee Muqdisho na loogu metelay meel amni noqotay (Ilaahay amni buuxa ha siiyo oo kama horjeedo in Muqdisho amni noqoto iyo in lagu sheego toona).
Filim kasta oo aan qorayo iyo riwaayad walba oo aan curinayo, marnaba suurtogal ma aha inaan ku daro muuqaal odhanaya, “Muqdisho ayuu tegay, imikaan ku soo qarxinayaa oo way ii fududahay ba”, hadii aanan ujeeddo ka lahayn. Xitaa iyadoo ay run tahay, haddana marnaba ma samayn karo, mana rabo inaan gefkaa umadda ku dhaqan Muqdisho iyo Soomaaliya toona u dhigo kaydka filimada, sababtoo ah dhibta lamay dhalan ee mar ayuun bay qaraxa iyo dagaalladu ka dhammaanayaan. Haddaa, sidee baa Telefishankaa looga aqbali karaa markaa inuu Somaliland iyo Hargeysa u dhigo sawir odhanaya, si fudud baa laguugu dili karaa?
Telefishanka UNIVERSAL dedaallada iyo halabuurka filimada ee ay sameeyeen, waxa wanaagsan inay ka reebaan wixii gef ah. Waxa la gudboon in uu saxo, raalligelin ka bixiyo, iskana hubsado goobaha metelaadda iyo sifooyinka la siinayo. Eedda na lama wada laha ee masuuliyaddu waxay saaran tahay qoraha, hagaha iyo cid kasta oo xilku gaar u saaran yahay.
Yasmin M. Kaahin.